रहस्यमय घटना पार्स: किन, एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा, घडी स्टप
विश्व रहस्यमय र जादुई घटना भरिएको छ। को दन्त्यकथा तल मा, मा साहित्य पाठ्यक्रम, प्रयोग भन्नुहोस् र, व्याख्या गर्ने प्रयास। उदाहरणका लागि, तपाईं किन थाहा गर्न एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा, घडी रोक्छ? इतिहास मा यस्तो तथ्य धेरै दस्तावेज प्रमाण छन्, तर साँच्चै यो कसरी हुन्छ बुझ्न, कुनै एक असफल भएको छ। मृत्यु घडी संग एक व्यक्ति आज उपलब्ध संस्करण प्रयोग रोक्छ किन बुझ्न प्रयास गरौं।
हाम्रो जटिल विषय बुझ्न, तपाईं शताब्दीयौंदेखि को गहिराइमा मा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि, आधुनिक सभ्यता को सुरुतिर मा, तंत्र दुर्लभ थिए। एक चमत्कार - आफ्नो निर्माताहरू लगभग विजार्डहरू र आफूलाई Timepieces लाग्यो। मालिक, नियम, गरौं कसैले बोट नै र wooed हेर्न कहिल्यै। र यो आफ्नो अन्तिम क्षण छ जब, अरू कसैलाई को संयन्त्र को अनमोल रहस्य पारित गर्न समय छैन, म सधैंभरि छैन कि मानिस थिएन। किन, एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा, घडी स्टप नातेदार स्वाभाविक आश्चर्य। उनीहरूको प्रतिक्रिया को निरक्षरता भेट्टाउन सकिएन। यो लगभग रूपमा जादूटुना घटना बुझाउँछ। तर हामी एकदम यस्तो प्रकट गर्न सक्षम छन् केहि छ खुला गोप्य। यो मध्य युग मा यांत्रिक थिए हेर्नुहोस्। कुनै तिनीहरू घाउ छैन, त्यसैले तिनीहरू टिक रोकियो। तर, अनौठो कुरा हो भन्ने तथ्यलाई को विचार, गहिरो हाम्रो पुर्खाहरूको टाउको मा फँस। प्रसारण दन्त्यकथा, चुपचाप whispered, तर किन, एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा, घडी स्टप बाहिर आंकडा गर्न प्रयास गरेका थिए। यो आज "nakarkat" भनिएको छ कि बाहिर गरियो।
एक व्यक्ति मर्छ किन घडी बन्द?
Mystics ब्रह्माण्डको संरचना को आफ्नै दृश्य दिएको घटना लागि उपयुक्त हो। खैर, दशकसम्म physicists पनि हल्का को कण-लहर प्रकृति सिद्ध गर्दा दृश्य आफ्नो बिन्दु, गर्न नजिकबाट हेर्न थाले। तर यो कि बारे छैन। ब्रह्माण्ड ऊर्जा हुन्छन्। प्रत्येक वस्तु आफ्नो क्षेत्र छ। र सबै प्रत्येक अन्य अन्तरक्रिया गर्नुहोस्। विशेष मा, पाहुना आभा, उनको द्वारा निर्देशित गर्न समायोजन गर्न घडी। किन हो यहाँ काम गर्न ceases र - एक व्यक्ति पर्याप्त लामो लागि संयन्त्र छ भने, उसले आफ्नो मुड गर्न, जडान गुमेको, प्राणको आन्दोलन "महसुस" जवाफ। आफ्नो काम, व्यर्थ अनावश्यक हुन्छ जब एक व्यक्ति मरेपछि घडी, रोक्छ। यस्तो अनौठो सिद्धान्त को realists द्वारा scrutiny गर्न खडा गर्दैन। तर, यो भूमि गुमाउने, को debaters मौन गिर भनेर धेरै दस्तावेज तथ्य पुष्टि गरिएको छ। समय गणना को संयन्त्र हत्या रहस्यमय जडान, criminologists याद भन्ने तथ्यलाई। पनि अक्सर तिनीहरूले स्थिर हातले अपराध घडी सिकार को हात मा देखेको छ।
को esoteric संस्करण
प्राण - छैन सम्पूर्ण गैर-भौतिक शिक्षा हो। प्रयोग परिणाम अन्य संसारमा गर्न संक्रमण को समयमा शरीरको वजन मा परिवर्तन साबित को जो रूपमा मरिरहेका संग सञ्चालन गरिएको छ। यो वास्तवमा (विज्ञान अस्वीकार गर्दैन) व्याख्या किन, एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा, घडी रोक्छ, आधारित esoterica। ज्ञान को यो शाखा विशेषज्ञहरु शरीर बाट प्राण को कि निकासी ऊर्जा को एक विशाल, विशाल मात्रा को रिलीज सँगसँगै छ भन्ने विश्वास। उहाँले लगभग एक supernova विस्फोट जस्तै, सूक्ष्म दुनिया मा देखिन्छ। हामी, हाम्रो ब्रह्माण्ड बासिन्दाहरू छ न हेर्न न त महसुस, न त समाधान गर्न सक्दैन। बस प्रविधी अझै त सिद्ध एक उपकरण शरीर, एक उपयुक्त संग आएको छैन, सुसज्जित छैन। तर घण्टा यो ऊर्जा स्पाइक प्रतिक्रिया सक्षम थिए। आफ्नो संयन्त्र आक्रमण शक्ति सामना गर्न सकिँदैन, त्यसैले तिनीहरूले पाहुना संग मर्छन्। यो सिद्धान्त, पनि, सही विचार गर्न सकिन्छ। इतिहास त्यहाँ तथ्य रोक्न पनि मरिरहेका मालिक टाढा रहन chronometers छन्। हराएको रही बिना esoteric आलोचना मा, प्रश्नको जवाफ: "अनि तपाईं पहिले नै र एक सूक्ष्म क्षेत्रहरू छन् भन्ने थाहा कसरी काम?"। त्यहाँ तिनीहरूलाई पिट्न केही छ वर्तमान क्षणमा विज्ञान। किनभने संस्करण कामको रूपमा मानिन्छ, तर स्पष्टीकरण आवश्यक छ।
वैज्ञानिकहरूले विशेष मुर्ख कुरा, मानिसहरूको विश्वास गर्न रुचि छैन। त्यसैले तिनीहरू सार्वजनिक गर्न भन्न र आफूलाई आफ्नो सिद्धान्त लागि नयाँ विचार को विविध लोकगीत मा आकर्षित। Physicists पनि एक व्यक्ति मृत्यु हुँदा किन, हेर्छ रोक्न छक्क परे। पहिलो, यो समस्याको धाउन र ऋण सेवा भेट ब्रह्माण्डको लिपिबद्ध कुनै पनि घटना, व्याख्या लागि दोश्रो, यो आवश्यक छ अदालती विज्ञान। मात्र तिनीहरूले एक डिजिटल घडी मा लगे थिए। Physicists को विद्युत क्षेत्र को संयन्त्र मास्टर आभा मा बन्द छ hypothesized छन्। मानिस पनि एक निश्चित सानो शुल्क छ। यसको मूल्य व्यक्तिगत, मौसम र अन्य कारक अवस्था फरक गर्न सक्नुहुन्छ। अतिरिक्त बिजुली मान्छे वरपरको वस्तुहरु मा हालियो, नजिक छन् कि ती। एउटा हेर्ने - हाम्रो मामला मा। यो संयन्त्र अतिरिक्त पोषण र यसलाई कन्फिगर हुन्छ। र मृत्यु हुन्छ जब, ऊर्जा अब प्रवाह, को संयन्त्र तल खण्डन गरिएको छ।
तपाईंले लामो त्यहाँ पुष्टि कुनै प्रयोगात्मक प्रमाण छ रूपमा, प्रत्येक विशेषज्ञ आफ्नो परिकल्पना रक्षा गर्ने अधिकार छ, थाहा छ। तथ्य सङ्कलन गरौं र प्रतियोगिता पिट्न कसरी सोच्न। यो समस्या बारेमा विचार? सायद यो नोबेल पुरस्कार पहिलो चरण हुनेछ। शुभकामना छ!
"कप्तान Pushkarev" (डुङ्गा): नदी मा परिभ्रमण
औषधि "Akatinol Memantine": समीक्षा र प्रयोगको लागि निर्देशन
कारण र उचित हेरविचार: किन बन्दागोभी दरार